चौथो अध्याय- तपाईको ब्रत – Islam Guide
रमजान महिनाका विशेषताहरु
इस्लामि पात्रो अनुसार नवौं महिनामा रमजानको ब्रत बस्नु पर्दछ।
इस्लामि पात्रो अनुसार नवौं महिनामा रमजानको ब्रत बस्नु पर्दछ। यो नै पूरै वर्षको सर्वोत्तम महिना हो। यो महिनालाई जति पुण्य, धार्मिक गुण र विशेषताहरु प्रदान गरिएका छन् त्यति अन्य महिनालाई प्राप्त छैनन्। तीमध्ये केही यस प्रकार छन्…
१) अल्लाहले यसै गरिमामय महिनामा सबैभन्दा ठूलो ईश-ग्रन्थ; पवित्र कुरआनलाई अवतरण गर्नु भएको छ। अल्लाहले भन्नु भएको छ… “रमजानको महिनामा कुरआन अवतरण गरियो; जुन सिङ्गो संसारकै लागि मार्गदर्शन हो। जसमा पथप्रदर्शन, सत्य र असत्यलाई छुट्याउने प्रमाणहरु छन्। अत: तिमीहरुमध्ये ज-जसले यो महिनालाई पाउँछ, उसले अनिवार्य रुपमा यसको ब्रत बस्नु पर्छ।” (श्रोत- सूरह अल्-बकरह : २/१८५)
२) रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ले भन्नु भएको छ… “जब रमजान शुरू हुन्छ, स्वर्गका सबै ढोकाहरु खोलिन्छ, नरकका ढोकाहरु बन्द गरिन्छ र उपद्रव मच्चाउने शैतानहरुलाई जकडेर राखिन्छ।” (श्रोत- बुखारी : ३१०३, मुस्लिम : १०७९) यसरी अल्लाहले सत्कर्मतिर लम्किने र कुकर्मलाई त्याग्ने सुनौलो अवसर प्रदान गर्नु भएको छ।
३) जो रमजानका दिनहरुमा ब्रत बस्छ र राति तराविह पढ्छ भने उसका अघिका पापहरु पखालिन्छन्। रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ले भन्नु भएको छ… “जुन व्यक्ति ईमान र पुण्यका साथ ब्रत बस्छ उसका सम्पूर्ण पापहरु माफ हुन्छन्।” (श्रोत- बुखारी : १९१०, मुस्लिम : ७६०) उहाँले फेरी भन्नु भएको छ… “जुन व्यक्ति ईमान र पुण्यका साथ रातमा तराविह पढ्दछ उसका सम्पूर्ण पापहरु माफ हुन्छन्।” (श्रोत- बुखारी : १९०५, मुस्लिम : ७५९)
४) सिङ्गै वर्षको सर्वोत्तम रात; लैलतुल्-कद्र (शुभ रात्री) यसै महिनामा पर्दछ। उक्त रातको उपासना हजारौं महिनाको उपासना भन्दा उत्तम छ। अल्लाहले भन्नु भएको छ… “लैलतुल्-कद्र (शुभ रात्री) हजारौं महिनाको (उपासना) भन्दा उत्तम छ।” (श्रोत- सूरह अल्-कद्र : ९७/३) उक्त रातको उपासनाले अघिका पापहरु पखालिन्छन्। यो रात रमजानको अन्तिम १० रातहरुमध्ये कुनै एक रात हो, तर कुन रात हो किटानीका साथ अल्लाह बाहेक कसैलाई पनि जानकारी छैन।
अल्लाहले विभिन्न उद्देश्य र लोक परलोकका अनेकौं फाइदाहरुका लागि ब्रत अनिवार्य गर्नु भएको छ। तीमध्ये केही यस प्रकार छन्…
१- तक्वा (ईश्-भय) प्राप्त गर्नु-
अल्लाहको निकटता प्राप्त गर्ने ठूलो माध्यम ब्रत नै हो। ब्रत बसेको बेलामा लुकेर खान सकिन्छ, यौन तृष्णा मेटाउन सकिन्छ, तर भक्तले यसो किन गर्दैन, ’cause अल्लाहले उसलाई हरेक ठाउँमा हेरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा उसको मनमा पलाउँछ। अल्लाहले भन्नु भएको छ… “हे आस्थावानहरु हो ! “तिमीहरुमाथि ब्रत अनिवार्य गरिएको छ, जसरी तिमीहरु भन्दा अघिका मानिसहरुमाथि अनिवार्य गरिएको थियो। यसबाट तिमीहरुमा तक्वा (ईश्-भय) उत्पन्न हुनेछ।” (श्रोत- सूरह अल्-बकरह : २/१८३)
२- पाप र कुलतलाई छोड्न मद्दत पुर्याउँछ-
यदि ब्रतालुले अल्लाहको आदेश अनुसार वैध कुराहरु छोड्न सक्छ भने अवैध कुराहरुलाई अवश्य नै छोड्न सक्छ। कुलतमा फसेका व्यक्तिहरुका लागि यो एउटा सुवर्ण अवसर हो। रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ले भन्नु भएको छ… “जुन व्यक्तिले झूठो बोल्न र कुकर्म गर्न छोड्दैन भने अल्लाहलाई उसको खानपिन त्याग्नुको कुनै आवश्यकता छैन।” (श्रोत- बुखारी : १८०४) तसर्थ जुन व्यक्ति झूठो बोल्न र गलत कार्य गर्न छोड्दैन, उसले ब्रतको उद्देश्य नै प्राप्त गर्न सकेन।
३- दीन-दु:खीहरुको सम्झना र सहानुभूति-
युगौ युगसम्म राम्रो खान र लाउन नपाएका गरीब र दीन-दु:खीहरुको सम्झना ब्रतको भोक र तिर्खाले गराउँछ। यिनीहरुप्रति मनमा माया र सहानुभूति पलाउँछ। त्यसैले धनीले गरीबलाई कहिल्यै पनि हेला र अपमान गर्दैनन् बरु ’emलाई दुई छाक टार्न र एक सरो लगाउन मद्दत पुर्याउँछ, किनकि ब्रत पारस्पारिक सहानुभूति र उपकारको वसन्त ऋतु हो।
ब्रतका अनेकौं विशेषताहरु छन्, तीमध्ये केही यस प्रकार छन्…
१) जुन व्यक्ति ईमान, अनुसरण र पुण्यमाथि पूर्ण विश्वासका साथ ब्रत बस्दछ, उसका अघिका पापहरु पखालिन्छन्। रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ले भन्नु भएको छ… “जुन व्यक्ति ईमान र पुण्यको आशा गर्दै ब्रत बस्छ, उसका अघिका पापहरु पखालिन्छन्।” (श्रोत- बुखारी : १९१०, मुस्लिम : ७६०)
२) ब्रतालुहरु आफ्नो प्रभुसित भेट्ने समय धेरै पुण्य र वरदान पाएर एकदम खुशी हुने छन्। रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ले भन्नु भएको छ… “ब्रतालुहरुका लागि दुईवटा खुशी छन्… एउटा ब्रत खोल्ने समयको र अर्को आफ्नो प्रभुसित भेट्ने समयको खुशी।” (श्रोत- बुखारी : १८०५, मुस्लिम : ११५१)
३) ब्रतालुहरुको सम्मानका लागि स्वर्गमा विशेष ढोका तयार पारिएको छ। ब्रतालु (रोजादार) बाहेक अरु कोही त्यस ढोकाबाट प्रवेश गर्ने छैन। रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ले भन्नु भएको छ… “स्वर्गमा ‘रैयान’ नामको ढोका रहेको छ, जसबाट ब्रतालुहरु मात्रै प्रवेश गर्ने छन् र अन्य व्यक्ति त्यो ढोकाबाट भित्र छिर्न सक्दैनन्। खोई कहाँ छन् ब्रतालुहरु ? सुन्ने बित्तिकै ’em अगाडि आउने छन् र सम्मानपूर्वक स्वर्गमा प्रवेश गर्ने छन्। उनीहरू प्रवेश भईसकेपछि ढोका बन्द हुन्छ र अरु कोही प्रवेश गर्न सक्ने छैनन्।” (श्रोत- बुखारी : १७९७, मुस्लिम : ११५२)
४) अल्लाहले ब्रतको प्रतिफल म दिन्छु भनेर घोषणा गर्नु भएको छ। अल्लाह जस्तो दयालु र करुणामयले के कति दिनुहुन्छ यसलाई कोही पनि अनुमान लगाउन सक्दैनन्। अल्लाहले भन्नु भएको छ… “आदमको सन्तानले जे जति पुण्य गर्छ, त्यसको बदला तोकिएको छ, तर ब्रत मेरो लागि हो र म नै यसको बदला दिनेछु।” (श्रोत- बुखारी : १८०५, मुस्लिम : ११५१)